HomeWararka Maanta‘Sevilla waxay ku dagaalantay isku duubni iyo adkaysi’ – Emery
Tababaraha naadiga Sevilla, Unai Emery ayaa farxadu ka hadlisay oo ku sifeeyey kooxdiisa kuwo ‘wadajir iyo adkaysi ku dagaalamayay.’ Ciyaartii ay ku karbaasheen Benfica kuna guulaysteen horyaalka labaad ee ugu qaalisan Yurub ee Europa League.
Kooxda Spanish ka ah ayaa ahayd tan laga awooda badan yahay kulankaasi Finalka Europa League oo ka dhacay xallay magaalada Turin ee wadanka Talyaaniga, laakiin markii daqiiqadihii rasmiga ahaa iyo kuwii lagu darayba lagu kala bixi waayay , rigoodhayaashii loo dhigay u horseedeen damaashaadka iyo dabaal deggii weynaa .
Sevilla ayaa shabaqa dhigtay 4 tii kubadood ee rigoodhaha ahaa ee ay laagteenba, halka Benfica ay lumiyeen laba kamid ah 4 tii kubadood ee sidoo kale loo dhigay – sidaasna ay ku hantiyeen horyaalkii saddexaad ee Europa league ah ee ay qaadaan.
“Benfica waa koox weyn,” ayuu yidhi tababare Emri. “Markii uu dhamaaday wakhtigii dheeraadka ahaa ee lagu daray, waxaanu ahayn kuwo daal kax ah, laakiin waxaanu aqoon u lahayn sida loo maareeyo xaaladaha adag oo ah wadajir.”
Koox si ay niyadda ugu dhisto laacibiinteeda sheeko la yaab leh ku dhaqaaqday!
31/05/2014 Khadar Dirir
“Diyaar ayaanu u nahay kulanka Real Madrid”Marco Reus